माघ ७, काडमाडौं । काडमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ६९ ओटा पूर्वाधार निर्माणका योजना सम्पन्न गरेको जानकारी दिएको छ ।
कामपाले चालू आवमा रू. १४ अर्ब २६ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कामपा भौतिक पूर्वाधार विभागका लागि चालू आवको विनियोजित बजेट रू. तीन अर्ब एक करोड ६१ लाख छ हजार छ । रासस